Mmetụta ịde blọgụ na Nchọgharị Organic | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 21, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị mmadụ na ụlọ ọrụ anaghị amata ike ịde blọgụ dị ka njikwa dị mma maka ịre ahịa. Otu uru m ga-achọ inye gị bụ mkpa ọ dị ịnweta ọchụchọ (ndị mmadụ na-achọ ịchọta gị site na injin ọchụchọ) yana nsonaazụ nke ịde blọgụ.
Enwere m saịtị abụọ iji tụnyere, Payraise mgbako na Na Mmetụta na Mwekota. Payraise Calculator bụ ebe nrụọrụ na-agbanwe agbanwe ebe ọdịnaya anaghị edozi ya oge niile. Enwere okwu ọchụchọ akọwapụtara nke a na-ahụpụtara Calculator Payraise ugboro ugboro. You'll ga-ahụ nke a na nsonaazụ ọchụchọ nke Google na saịtị ahụ na oge na-esote eserese a. Emere m ụfọdụ njikarịcha Search Engine wee gbanwee ụfọdụ ọdịnaya na nso nso a.
Payraise Calculator - Static Ọdịnaya
N'ihi na ọdịnaya nke On Influence na-agbanwe kwa ụbọchị, ọnụọgụ nke okwu ọchụchọ na-aga n'ihu na-agbanwe. Ihe agbakwunyere na-eme ka saịtị ahụ 'chọta ya' site na ọtụtụ okwu ọchụchọ yana isi okwu. N'ihi ọdịnaya ahụ na-aga n'ihu na-agbanwe, saịtị ahụ na-enyocha saịtị ọchụchọ ma na-edegharị aha ya dabere na nchọta ndị ahụ. Rịba ama mgbanwe dị na nchọta organic site na Google n'oge na-aga:
Na Influence na akpaaka - ọdịnaya di omimi
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme otu akụkọ a site na iji Google Analytics, ị nwere ike ịga na-ezo aka na isi mmalite (na nke a, Google), setịpụ ụbọchị gị, wee pịa akụ abụọ wee họrọ 'Data over Time':
Jiri Google Docs na WordPress?
Nabata na Blogosphere, Paul